कथा – माग्ने जात | साहित्य संगालो २०१३
कथा – माग्ने जात
Posted on September 1, 2013 by भण्डारी2013
कुनै पनि चाड पर्व आयो कि मागी हिंड्ने बानी भएको अर्जुनलाल दमाई यसपालीको दशैंमा पनि माग्नको लागि सबैको घर चाहार्न थाल्यो।
माग्दै हिंड्ने क्रममा उ एउटा चिया पसले कहाँ पनि पुग्यो। चिया पसले सफा र सरल मिजासको थियो। यसो हेर्दा उ समाजका बाहुन, क्षेत्री वा अन्य कुनै कथित उच्च जाति भन्दा कुनै फरक देखिंदैनथ्यो। जेहोस् त्यो चियापसले कुनै चिन्तनशील बुद्धिजीवी जस्तै निकै भद्र र सभ्य देखिन्थ्यो। विहानदेखि साँझसम्म मेहेनत गरेर उ चिया पसल चलाउथ्यो। नमस्कार साउजी? मागि खाने जात परियो घ् चिया पसलमा भित्रिंदै अर्जुनलालले भन्यो नमस्कार दाई, नमस्कार घ् यतै बेन्चमा बस्नुस्न। चिया पसलेले अर्जुनलालको आगमनलाई स्वागत गर्‍यो।
“हाम्रो साउजी खुब असल, गरिब गुरूवालाई दया, माया गर्ने ठूलो मान्छे हुनुहुन्छ। दमाई, कामी भनेर हामीलाई कुनै भेदभाव नगर्ने यति मिठो बोलिवचन भएको हाम्रो साउजी घ् यति राम्रो रूपरंग भएको हाम्रो साउजी घ् तपाईलाई भगवानले सधै भलो गरिरहुन …।” बेन्चमा बसेर अर्जुनलालले चिया पसलेको गुणगान गाउँदै माग्ने मेसो निकाल्दै थियो।
“समय कहाँ देखि कहाँ पुगिसक्यो। यो मान्छे भने अझै पनि दमाई जातको नाममा माग्दै हिंडेको छ। यो समाज पनि कस्तो समाज होला एउटा सिंगै जातिलाई माग्ने जातको रूपमा दर्ता गरिदिएको छ।” चियाको कित्ली सफा गर्दै पसलेले मनमनै तर्कना गर्‍यो।
“यसरी माग्दै हिंड्ने यो मान्छेलाई केही कुरा भन्न पाए यसको मन परिवर्तन हुन्थ्यो कि …।” पसलेको मनमा त्यो माग्ने मान्छेसँग केही कुरा गर्ने इच्छा जागृत हुँदै थियो। तर चिया पसलमा आएका ग्राहकहरूको सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्तताको कारण पसलेलाई अर्जुनलालसँग कुरा गर्ने मौका मिलिरहेको थिएन। ग्राहकहरू समोसा, चाउमिन, जेरी, चिया आदि स्वाद मानिमानि खान्थे।
यसरी चिया पसलमा ग्राहकहरू आउने जाने क्रम जारी थियो।
“नमस्कार सर घ् म गरिबलाई दया गरिदिनुस्। मेरा श्रीमती मरेको पाँच वर्ष भैसक्यो घरमा मेरो छोराछोरी भोकै छन्। यो चाडबाडको बेला…।” चिल्लो अनुहार भएको र कोट पाइन्टमा सजिएको बृद्धिजीवी जस्तै देखिने एउटा ग्राहकसँग अर्जुनलालले अनुनय गर्‍यो।
“यो दमाई यसरी नै बाँचको छ। सधै माग्छ मसँग …।” कोटको गोजीबाट पचास रूपैयाँ झकेर अर्जुनलाललाई दियो।
“हाम्रो सर धेरै पढे लेखेका जान्ने मान्ने मान्छे : ठूलो दिल भएको हुनुहुन्छ…।” अर्जुनलालले उसको सके जति प्रशंसा गर्‍यो।
“यस्ता पनि हाम्रो समाजका बुद्धिजीवी कहलाउँछन्। यस्तालाई पनि के पढे लेखेका भन्नु? के जान्ने मान्ने मान्छे भन्नु? जसले पछाडि पारिएका मानिसलाई स्वाभीमानपूर्वक बाँच्ने पाठ सिकाउनुको उल्टो दासता र पराधीनताको पुरानो संस्कारभित्र बाँच्ने परम्परालाई प्रोत्साहन गरिदिन्छन्…।” पसलेले मनमनै बुद्धिजीवी जस्तै देखिने त्यो मान्छेप्रति खेद व्यक्त गर्‍यो। वास्तवमा कोट पाइन्ट पहिरिएका बुद्धिजीवी जस्ता देखिने ती मान्छे “नवज्योति बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख थिए।
“नमस्कार बाबुसाहेब…।” कपाल फुलेका, दौरा सुरूवालमा ठाटिएका र २/४ जना मानिसहरू पछि लाएर हिंडिरहेका कुनै नेता जस्ता देखिने मान्छेलाई पनि अर्जुनलालले पसलबाटै नमस्कार गर्‍यो। तर त्यो मान्छेले भने थाहा पाएर पनि अर्जुनलालको नमस्कारलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्यो। विचरा अर्जुनलालको नमस्कार त्यसै खेर गयो। उ एकछिन ट्वाल्ल पर्‍यो। यो दृश्य देखेर चिया पसलेलाई नरमाइलो महशुस भयो।
“यस्ता पनि छन् हाम्रो देशका नेताहरू जसले आफ्ना जनतालाई सम्मान गर्न जान्दैनन्। सायद दमाई जात भनेरै होला यी नेताले नमस्कार समेत उपेक्षा गरिदिए।” पसलेले त्यो नेताप्रति पनि भित्रभित्रै घृणा व्यक्त गर्‍यो।
चिया पसलमा मान्छेहरूको आउने जाने क्रमसँगै करिव–करिव दिनको मध्यान्ह भैसकेको थियो। त्यसैले चिया पसलमा मान्छेहरू हटिसकेका थिए। त्यसैकारण यतिबेला पसलेलाई फुर्सद मिलिसकेको थियो। “अब यो मान्छेसँग केही कुरा गर्नु पर्‍यो ” भन्ने सोच्दै उ अर्जुनलाल दमाईको देउमा गएर भर्खरै मात्र बसेको थियो। यस्तैमा हातामा सूर्य चुरोट तान्दै ठूलो भुडी भएको एउटा मोटे मान्छे २/४ जना उसका साथीहरूसँग त्यै चिया पसलमा आइपुग्यो।
“नमस्कार ठेकदार साप घ्” अर्जुनलालले उसलाई पनि नमस्कार टक्रायो। प्रतिउत्तरमा ठेकेदारले बढो घमण्डी पाराले टाउको हल्लाइदियो मात्रै।
“हाम्रो ठेकेदार साप त पैशावाल मान्छे। सयपचास भन्ने कुरा त उहाँको लागि केही पनि होइन। पोहरसाल दशैमा टन्न खुवाउनु भएको हो। म गरिबलाई रक्सी र चुरोट खाने पैसा… हाम्रो ठेकेदार साप…।” अर्जुनलालले मोटे ठेकेदारको पनि खुव गुनगान गर्‍यो। “ल यो सालको दशै मान्नु…।” अर्जुनलालको पीडा बुझेझैं गरी आफ्नो पर्सबाट रू. दुई सय झकेर ठेकेदारले सानपूर्वक अर्जुनलाललाई दियो।
“हाम्रो ठेकेदार सापको जय होस घ्” रू. दुईसय नगद पाएपछि अर्जुनलालको अनुहारमा हर्षको कान्ति फैलियो।
“यो मान्छे हाम्रै गाउँको दमाई हो। चाड पर्व आउनु हुन्न यसलाई माग्न आइहाल्छ। आखिरी यो दमाई जात मागि खाने जात न पर्‍यो ….।”ठेकेदारले अर्जुनलालको अपहेलनामा आफ्ना साथीभाईहरू सँग चिया गफ लगायो।
“यो कस्तो समाज हो। जहाँ जातको आधारमा मान्छेले मान्छेमाथि नै भेदभाव गरिरहेको छ। धन,पैसाको रवाफमा एउटा मान्छेद्वारा अर्को मान्छे अपमानित र अपहेलित हुन पुग्दछ। आखिरी यो कुरूप युगको अन्त्य कहिले हुने होला…।” चियाको कित्ली चुलोमा बसाल्दै चिया पसलेले सोच्यो। जेहोस् अहिलेसम्म चिया पसलमा बसेर अर्जुनलालले दशौं जनाको अगाडि शिर झुकाएर माग्ने काम पूरा गरेको थियो।
ठेकेदारले आफ्ना साथीभाईहरूसँगको गफ अझै सकेको थिएन। उसले उही अर्जुनलाल दमाईकै सन्दर्भमा गफ गरिरहेको थियो।
“… आखिर दमाई जात भनेको दमाई जात नै हुन्। जतिसुकै अधिकारको कुरा गरे पनि जति सुकै समय बदलिए पनि आफ्नो जात दर्शाइ हाल्छन्। पोहर सालको दशैंमा पनि यो दमाई आफू चाहिं माग्दै हिंडेको रहेछ । छोरा चाहिंले त्यै परको कमला फेन्सी स्टोरबाट पाँचसय चोरेर बेइज्जत…। यी दमाईका कुरा गरेर साध्य छैन लौ हिंडौं अब …।” चिया गफ सिद्धाएर सबै चिया पसलबाट बाहिरिए।
यसरी चिया पसलमा आउने जाने कुनै पनि व्यक्तिको मुखबाट अर्जुनलाल र दमाई जातिप्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति नआएपछि चिया पसले निकै खिन्न भयो।
उता चिया पसलमा अपहेलित हुनु परेकोमा अर्जुनलालको हृदय पनि आगोले पोले झैं भत्भति जल्दै थियो। आफूलाई दमाई भनेर हेला गरी बोलेकाहरूलाई जिउँदै खाउ झैं भएको थियो। क्याम्पस प्रमुख, ठेकेदार, नेताजी आदि सबैबाट अपमानित हुनु परेको पीडा र रिस थाम्न उसलाई गाह्रो परिरहेको थियो। तैपनि उमा कसैसँग पनि प्रतिवाद गर्न सक्ने आँट थिएन। दमाई भएपनि यस्ता कुरा त सहनै पर्‍यो नि भन्ने सोच्दै उ खिस्स हाँसेर सबै कुरा चुपचाप पचाई दिएको थियो र माग्ने कुरा जारी राखेको थियो।
“साउजीबाट पनि यसपालिको दशैं भाग २/४ रूपैयाँ सहयोग हुन्थ्यो कि के गर्ने दुःखीको कर्म यस्तै त हो नि। हिजो साँझ घरमा छोराछोरीलाई खोले चटाएर बास बसाएँ…।” अर्जुनलालले चिया पसलेबाट पनि २/४ रूपैयाँ झार्ने प्रयास गर्‍यो।
“हेर्नुस दाई दुःख नमान्नुहोला। म तपाईलाई अहिले एक सुक्का पनि दिन चाहन्न …।” यतिबेला पसलमा अरू मान्छे कोही नभएकाले अर्जुनलालसँग पसलेले निर्धक्क भएर कुरा गर्न चाह्यो।
“किन र साउजी हाम्रो त माग्ने जात नै पर्‍यो …।” अर्जुनलालले आफ्नो कुरा राख्यो। “माग्ने जात भन्ने कुरा कहाँ लेखेको छ र? हेर्नुस दाई तपाईले अब यसरी मागी खाने काम रोक्नुपर्छ। किनकि मागी खाने काम वास्तवमा राम्रो काम होइन। हामी सबैले थाहा पाएकै कुरा त हो नि। माग्ने मान्छेको हात सधै तल हुन्छ भनेर। हैन र? ” चिया पसलेले गम्भीरतापूर्वक भन्यो।
“हुन त हो साउजी तैपनि हाम्रो भाग्यमा यही लेखेर आएपछि कस्को के लाग्छ र? कर्मको फल भोग्नै पर्‍यो…।” अर्जुनलालले भाग्य र कर्मको कुरा अघि सार्यो।
“भाग्य र कर्म भनेर हुँदैन दाई यी सबै हाम्रो आफ्नै हातमा भर पर्दछ। जे–जति कुरा गरे पनि माग्ने भन्ने कुरा त राम्रो हुँदै होइन। संसारमा जो मागेर बाँचेको छ। त्यो अनिवार्य पछि परेको छ। मान्छेका कुरा त के देशकै कुरा पनि यस्तै देखिन्छ। हेर्नुस दाई, अमेरिकाले माग्दैन। चीनले माग्दैन, जापानले माग्दैन यसरी जुन–जुन देश आत्मनिर्भर भएर चलेका छन्। ती देशहरू कति सम्पन्न र अगाडि बढेका छन्। तर नेपाललाई हेरौं त यसले सधै विदेशी दाताहरूको अगाडि हात थापिरहन्छ। तैपनि कति विपन्न र पछाडि परेको छ …।” चिया पसलेले लामो कुरा गर्‍यो।
अर्जुनलालले ध्यानपूर्वक चिया पसलेको कुरा सुनिरहेको थियो। बीचबीचमा उ लामो श्वास फेर्ने गर्थ्यो। जेहोस् चिया पसलेको कुरा सुनेर उ झन्झन गम्भीर हुँदै थियो।
“साउजीको कुरा त राम्रै हो तर के गर्ने दमाइको जात परियो। ” निकै बेरपछि अर्जुनलालले भन्यो। “के दमाई जात मान्छे होइन र? हेर्नुस त दाई, आज तपाईको कारण यो पसलमा भएभरका मान्छेले दमाई जातकै अपमान गरेर गए। दमाई जातलाई यसरी भेदभाव र अपमान गर्दा मेरो मनमा कति ठूलो चोट परेको थियो। त्यो कुरा त मलाई बाहेक अरूलाई के थाहा? ” पसलेले भन्यो।
“हैन साउजी दमाई जात प्रति तपाईको यति ठूलो चिन्ता किन?” अर्जुनलालले अचम्म मान्दै सोध्यो। “किन भने दाई म पनि दमाई नै हुँ…।” चिया पसलेले आफनो परिचय दियो। “तपाई जस्तो यति राम्रो रूपरंग भएको, मिठो बोलिवचन भएको, पसल चलाएर बस्ने भलाद्मी जस्तो मान्छे पनि दमाई।” अर्जुनलाल झन अचम्ममा पर्‍यो।
“हो दाई पहिले पहिले त मेरा बाउ बाजेले पनि यसरी माग्दै काम चलाउँथे। लामो समयसम्म म पनि मेरो बाउकै पछिपछि झोलि थाप्दै थाप्दै हिंडेथे। मान्छेहरू हामीलाई सधै दमाई भनेर हेप्दथे। यहाँसम्म कि हामीले छोएको पानी चल्दैनथ्यो। तर अब त मैले दमाई परम्परालाई तोडेर अघि बढिसकेको छु। हेर्नुस त दाई तपाई स्वयं देखिरहनु भएको छ अचेल मान्छेहरूले मेरो हातको चिया, समोसा, चाउमिन, जेरी कसरी मिठो मानिमानि खाने गर्दछन्…। त्यसैले दाई हामी दमाई जातलाई माग्ने जात बनाउने होइन केही गरेर अगाडि बढ्ने जात बनाउनुपर्छ….।” यसरी चिया पसलेले अर्जुनलालको दिमागमा क्रमशः चेतनाकेा सन्देश भर्दै थियो।
यसैबेला भुडे ठेकेदारको टोली पुनः त्यै चिया पसल हुँदै फर्कंदै थिए।
“अरे घ् यो दमाई त अझै पनि पसलमै ढुकेर बसेको रहेछ। मागेर कहिल्यै नपुग्ने कस्तो लाज नभएको दमाई रहेछ। आखिरी मागिखाने जात न पर्‍यो….।” अर्जुनलाल तर्फ इंकित गर्दै भुडे ठेकेदार घमण्डी पाराले बोल्यो।
अलि अगाडिसम्म जसले जे भने पनि खिस्स हाँसेर सही बस्थ्यो। सबै कुरा पचाई दिन्थ्यो जि हजुरी गरेर २/४ रूपैयाँ झार्दथ्यो। तर अहिले भने चिया पसलेको कुराले उसमा नयाँ चेतना खुलिसकेको थियो। त्यसैले अर्जुनलाल अब कसैको अन्यथा अत्याचार र अपमान सहन नसक्ने भैसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा ठेकेदारले बोलेका अपहेलित शब्दहरू उसलाई कहाँ सह्य हुन सक्दथ्यो र? यसैले चिया पसलमा दमाई भएर अपमानित हुनु परेको पीडा र रिस लिएर उसिदै ठेकेदारमाथि खनियो।
“हेर्नुस ठेकेदार साप, अहिले म यो पसलमा माग्नलाई बसेको छैन। अबदेखि ममाथि तपाईले यस्तो अपमान बोल्न पाउनु हुन्न बुझ्नु भो…।” ठेकेदारतर्फ चोर औंला ठडाउँदै अर्जुनलालले भन्यो।
“हैन के भन्छ यो दमाईले…।” ठेकेदार झस्क्यो।
“मैले ठिकै भनेको छु ठेकेदार साप, यी यो अघि तपाईले दिएको पैसा फिर्ता लिनुस र अबदेखि मलाई तपाईले दमाई भनेर पनि नहेप्नुस्।” ठेकेदारको २ सय रूपैया फिर्ता लिंदै अर्जुनलालले भन्यो।
संयोगवश यसैबेला कोट पाइन्ट पहिरिएका क्याम्पस प्रमुख पनि त्यही देखा परे।
“ए सर पनि आइपुग्नु भएको रहेछ….। यी लिनुस तपाईले पनि आफ्नो पैसा …।” अर्जुनलालले क्याम्पस प्रमुखको रू. पचास पनि फिर्ता गरिदियो।
“हैन यो के गरेको?” क्याम्पस प्रमुखले आश्चर्य प्रकट गर्‍यो।
“मैले ठिकै गर्दैछु सर। तपाईहरू जस्तो जान्ने मान्ने बुद्धिजीवीहरूले समेत दमाई जातलाई कहिल्यै माथि उठाउने सोच्नु भएन। उल्टै दमाई जातलाई माग्ने जात भनेर अपहेलना गरिरहनु भयो। तर अब म माग्ने जात होइन। केही गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु।” अर्जुनलालले चियापसलमा आएका ठेकेदार बुद्धिजीवी सबैलाई लज्जित बनाउँदै थियो। यसरी मानिसहरू अर्जुनलालद्वारा लज्जित हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको थियो। अब अन्त्यमा लज्जित हुने पालो कपाल फुलेका दौरासुरूवालमा ठाटिएर हिंड्ने “बाबुसाहेब” भन्ने नेताजीको आउँदै थियो। किनकि उनी पनि २/४ जना मान्छे अघि पछि लाएर परबाट त्यही चिया पसलतिर आइरहेका थिए।
जेहोस् यतिबेला अर्जुनलाल दमाईको शिर स्वाभीमानपूर्वक ठाडो भएको देखेर चिया पसलेको नशानशामा खुशीको तरंगहरू उठिरहेका थिए।
“अर्जुनलाल जस्तै सबै दलितहरू यसरी नै सचेत हुँदै गए भने त हामी दलितहरू युगौं देखिको उत्पीडनबाट मुक्त हुने थियौं…।” चियाको कित्ली सफा गर्दै पसलेले खुशीपूर्वक मनमनै तर्कना गर्‍यो।
यतिबेला चिया पसलेको मनमा अपूर्व खुशी छाएको थियो। सायद यस्तो खुशी उसको जीवनमा कहिल्यै छाएको थिए।
This entry was posted in Nepali Stories and tagged कथा, माग्ने जात by भण्डारी2013. Bookmark the permalink.